Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2017
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Oktobra, 2017
Medellín, Kolombià : Manohana Ny Hetsika Fanoherana ny Tolon'Omby ny Governemanta Ao An-Toerana
...voalohany indrindra teo amin'ny tantaran'ireo firenena miisa 8 mankalaza ny fomban-drazana antsoina hoe tolon'omby no nisy governemanta nanohana hetsika fanoherana ny tolon'omby...
Mpahay Tantara Thailandey Iray Mety Higadra 15 Taona An-tranomaizina Noho Ny ‘Fanivaivana’ Mpanjaka Taonjato Faha-16
Azia Atsinanana 28 Oktobra 2017
"Te hanenjika ahy fotsiny ny fitondrana miaramila. Azon'izy ireo atao ny zava-drehetra. Tratrako ny fahatoniana. Tsy mampaninona ahy izany. Raha ny marina mampalahelo ahy ry zareo... Mampalahelo ahy ireo manana fahefana.."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Oktobra 2017
Bilaogera Iraniana maromaro no miresaka momba ny fandresen'ilay kandidà ho filoha amerikana, Barack Obama, tao Iowa. Ity no fifaninanana fanendrena voalohany amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena taona 2008. Faly tamin'ny fandresen'i Obama ny sasany, raha nanombana mikasika ny fiantraikan'ny "Obama ho filoha" amin'ny fiainana ara-politika Iraniana kosa ny hafa.
Iran: Fihetsiketsehana Noho Ny Fandraràna Gazetiboky Momba Ny Vehivavy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Oktobra 2017
Noraràn'ny governemanta Iraniana roa herinandro lasa izay ny Zanan Magazine (midika hoe "gazetim-behivavy"), taorian'ny 16 taona nivoahany. Tato anatin'ny taona vitsy, nofoanan'ny manampahefana Iraniana ny fahazoan-dalana an'ireo gazety sy gazetiboky marobe, saingy ny fanakatonana an'i Zanan no tena niteraka fanoherana lehibe tao amin'ny firenena sy iraisam-pirenena.
Tao atsimon'i Iran, nisy fipoahana tao amin'ny moske iray tao an-tanànan'i Shiraz, izay nahafatesana olona 12 raha kely indrindra ary naratra teo amin'ny 200 tamin'ny 12 Aprily. Nanambara ny tranokalam-baovao tsy tena ofisialy an'ny governemanta, Fars, fa noho ny baomba no nahatonga ny fipoahana.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Oktobra 2017